Uhambo lwakho lweCajun luqala apha!
Uhambo lwakho lwaseLouisiana luqala apha! Uya kufumana i-cottage esanda kulungiswa, epholileyo ikulindele entliziyweni yeLafayette. ICajun Cottage ikwindawo esembindini kwaye ifanelekile kuhambo lwemini okanye ukubona indawo ejikeleze iLafayette. I-cottage iya kuba yinto efanelekileyo kwizibini, iintsapho, iingcali zoshishino, abafundi, njl kunye nendawo eyaneleyo yokusabalalisa. Indawo yokuhlala ibanzi kakhulu ngeplani yomgangatho ovulekileyo. Yitya ujikeleze itafile yendlu yasefama apho uyakonwabela ukulula kunye nokubukeka okusemazantsi.
Xa ungena ngesango uya kufumana intendelezo ekwabelwana ngayo apho uya kuba nokufikelela kwigrill, umgodi womlilo, indawo yokuhlala kunye nemidlalo yangaphandle. Khaba umva kwaye uphumle ngaphandle okanye uphumle kwi-cottage emlilweni (ukuba kwenzeka ukuba ube apha ngolo suku lunqabileyo lwasebusika). Imiqadi yeCypress iyakubulisa njengoko ungena ekhaya. Naphi na apho ujonga khona uya kufumana isiqwenga senkcubeko yaseLouisiana kunye nendalo kulo lonke uhombiso.
ICajun Cottage ibekwe phakathi kwemithi ye-magnolia kunye nemizuzu emi-5 nje yokuqhuba ukuya kwiYunivesithi yaseLouisiana, imizuzu eli-10 ukuya ezantsi edolophini, kanye kwikona ukusuka eMoncus Park & Girard Park, kunye nemizuzu ukuya kwizibhedlele zaseOchsner kwabo beza apha emsebenzini. Zininzi iindawo zokutyela kunye neevenkile zegrosari ngaphakathi nje kwemizuzu embalwa yokuqhuba.
Hey y’all! We are a fun, loving family of 8. We are so excited to have the opportunity to host you!
Silapha ukunceda naziphi na iimfuno okanye imibuzo onokuba unayo. Sikumganyana nje wokuhamba.